फिफा ‘द बेस्ट’ अवार्ड :कसले के–के जिते ? -
फिफा ‘द बेस्ट’ अवार्ड :कसले के–के जिते ?
एजेन्सी – गएराती लन्डनमा आयोजित एक समारोहमा फिफाले उत्कृष्ट खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई सम्मान गर्यो । फिफाले वर्षेनी विभिन्न विधामा उत्कृष्ट रहने गरेका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा व्यक्तित्वलाई फिफा ‘द बेस्ट’ अवार्डबाट सम्मानित गर्ने गरेको छ । कसले के के उपाधि जिते त ?
मोड्रीचलाई फिफाको ‘द बेस्ट’ उपाधि
फिफा ‘द बेस्ट’ अवार्ड रियल म्याड्रिड तथा क्रोएसियाका मिडफिल्डर लुका मोड्रीचले जितेका छन् । यसअघि फिफाले विभिन्न चरण गर्दै शीर्ष तीन खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । शीर्ष तीन स्थानमा रियल म्याड्रिडबाट च्याम्पियन्स लिग जितेका क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लुका मोड्रीचसँगै लिभरपुलका मोहमद सलाह रहेका थिए । मोड्रीचले गत सिजन क्रोएसियालाई विश्वकप फाइनलसम्म पुर्याउँदा कप्तानको भूमिका निभाएका थिए भने च्याम्पियन्स लिग उपाधि जिताउने क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । मोड्रीच फिफा विश्वकपको गोल्डेन बल विजेता पनि रहेका थिए । मोड्रीचले अर्जेन्टिनाविरुद्ध विश्वकपमा स्तरीय गोल गर्दै आफूलाई मिडफिल्डबाट गोल गर्न सक्ने क्षमता पनि देखाएका थिए ।
रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्ने क्रममा त्यस प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ताको उपाधि हात पारेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भने रोनाल्डोले खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन । रोनाल्डोले विश्वकपमा स्पेनविरुद्ध गोल गर्नुबाहेक खासै स्तरीय छाप बसाउन सकेनन् । सलाह भने लिभरपुलको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा मुख्य हतियार बनेका थिए । उनले प्रिमियर लिगको गोल्डेन बुट जितेका थिए । उनले पनि राष्ट्रिय टोलीलाई विश्वकपसम्म पुर्याए तर विश्वकपमा भने चोटका कारण राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।
कस्तो थियो छनोट हुनुको आधार ?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो (स्ट्राइकर)
क्लबः रियल म्याड्रिड र युभेन्ट्स
सफलता :च्याम्पियन्स लिग विजेता, च्याम्पियन्स लिगको सर्वाधिक गोलकर्ता, फिफा क्लब विश्वकप विजेता
लुका मोड्रीच (मिडफिल्डर)
क्लब :रियल म्याड्रिड
सफलताः च्याम्पियन्स लिग विजेता, फिफा क्लब विश्वकप विजेता, विश्वकपको फाइनलमा कप्तान, विश्वकपको गोल्डेन बल विजेता
मोहमद सलाह (स्ट्राइकर)
च्याम्पियन्स लिग फाइनल खेलेको, च्याम्पियन्स लिगको सर्वाधिक गोलकर्तामा दोस्रो स्थान, प्रिमियर लिगको सर्वाधिक गोलकर्ता
जिदान र डालीचलाई पछि पर्दै डेसच्याम्प्स बने उत्कृष्ट प्रशिक्षक
फ्रान्सेली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक डीडीएर डेसच्याम्प्सले उत्कृष्ट प्रशिक्षकको उपाधि जितेका छन् । उनले फ्रान्सलाई रुसमा विश्वकप उपाधि दिलाएका थिए । उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित हुने क्रममा डेस्च्याम्प्सले फ्रान्सका जिनेदिन जिदान र क्रोएसियाका ज्लाट्को डालीचलाई पछि पारे । जिदानले रियल म्याड्रिडमा रहँदा लगातर तेस्रो च्याम्पियन्स लिग जिताएका थिए । डालीचले भने क्रोएसियालाई विश्वकप फाइनलसम्म पुर्याउन अहम भूमिका खेलेका थिए । उपाधि विजेता डेसच्याम्प्सलाई फ्रान्सेली प्रशिक्षक आर्सेन वेंगरले विजयी ट्रफी प्रदान गरेका थिए ।
फ्रान्सलाई दोस्रो पटक विश्वकप विजेता बनाएका प्रशिक्षक डेसच्याम्प्सले सन् १९९८ पनि विश्वकप जितेका थिए । उनी त्यसबेला टोलीका कप्तानको भूमिकामा थिए । उनले सन् २०१६ को युरोपेली च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पोर्चुगलविरुद्ध पराजय भोगेपनि विश्वकपमा भने अपराजित रहँदै उपाधि दिलाए ।
रियलका गोलरक्षक कोर्टूवा उत्कृष्ट गोलरक्षक
फिफाको ‘द बेस्ट’ अवार्ड समारोहमा रियल म्याड्रिडका गोलरक्षक थिअबाउट कोर्टूवाले उत्कृष्ट गोलरक्षकको उपाधि जितका छन् । उनले बेल्जियम राष्ट्रिय टोलीलाई विश्वकप सेमिफाइनलसम्म पुर्याएका थिए । यसै सिजन स्पेनिस टोली रियल म्याड्रिड पुगेका कोर्टूवाले चेल्सीबाट पछिल्लो सिजन राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । उनले उपाधि जित्ने क्रममा फ्रान्स तथा टोटेनहम हट्सपरका कप्तान ह्युगो लोरिस र लेस्टर सिटीका गोलरक्षक कास्पर स्माइकललाई पछाडी पारे ।लोरिसले फ्रान्सलाई विश्वकप उपाधि दिलाउँदा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । स्माइकलले पनि डेनमार्कका लागि विश्वकपमा राम्रो प्रदर्शन गरे । कोर्टूवाले एटलेटिको म्याड्रिड र चेल्सीबाट लिग उपाधि पनि जितिसकेका छन् । बेल्जियमको राष्ट्रिय टोलीमा नियमित सदस्य रहेका उनले यसअघि प्रिमियर लिगमा पनि उत्कृष्ट ११ मा स्थान बनाएका थिए ।
Next A Background In Factors In Wife Now